Wasaarada waxbarashada P/land oo saagootisay Arday deeq waxbarasho heshay – SBC
Wasaarada waxbarashada P/land oo saagootisay Arday deeq waxbarasho heshay
Munaasabada lagu sagootinayey arday dalka Ethiopia ka helay deeqada waxbarasho ayaa lagu qabtay xarunta wasaarada waxbaashada ee Magaalada Garoowe ,
Waxaa ka qayb galay munaasabadaasi sagootin Wasiirada Wasaaradaha waxbarashada iyo arimaha gudaha Puntland, qunsulka Ethiopia u fadhiya yo waalidiin iyo marti sharaf iyo ardaydii la sagootinayay.
Wasiirka wasaarada waxbarashada Cabdi Faarax Siciid Juxaa ayaa kawaramay waxa ay soo baran doonan ardaydan oo tiradoodu gaarayso lixdan arday,
Waxaana uu sheegay Wasiir Juxaa in Ardaydani ay soo kala barandoonaan maadooyin kala duwan oo faaiido u leh, waxaana looga kala qeybin doonaa deegaanada Maamulka Federaalka ee Dalkaasi.
Wasiirka arimaha gudaha Puntland C/laahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo isagana halkaasi ka hadlay ayaa ku la dardaarmay ardayda in ay ka faaidaysantaan waxbarashada islamarkaana waxaa uu ku amaanay wasaarada waxbarashada dadaalkeeda ku aadan deeqaha waxbarasho ee ay u raadiso ardayda reer Puntland.
Qunsulka Ethiopia u fadhiya Puntland Ismalaash oo ardayda dalkiisa u aadaysa deeqada waxbarasho lahadlay waxa auu ku booriyey in ay ku daadaalan sidii ay uga faaiideysan lahaayeen deeqaha waxbarasho islamarkaana waxaa intaasi uu ku daray in dowladiisu siiwadi doonto deeqaha waxbarasho ee ay siiso Puntland oo uu sheegay in ay yihiin sxbo dhow.
Mid ka mid ah hooyoyinka dhalay ardayda helay deeqaha waxbarasho ayaa madasha ka sheegtay in ay ku faraxsantahay deeqdan waxbarasho ee lacag la.aanta waxayna ku amaantay daadalka wasaarada waxbarashadu ugu jirto in ay hesho deeqo waxbarasho.
Inkasta oo wasaarada waxbarashada Puntland sheegtay sadexdii sano ee la soo dhaafay ay deeqo waxbarasho u direen arday tiradoodu kor u dhaafyaso afar boqol oo arday sanadkan waa dufcadii ugu horaysay ee deeq waxbarasho u baxaysa iyadoona dowlada sudaan ay joojisay 50arday oo deeq waxbarasho ka helay ka dib markii ay wasaarada waxbarashada Somalia ku wargalisay in aysan aqabalin shahaadado uusan saxiixin wasirka waxbarashada Somalia